Sweden oo go'an kasoo saartay Dadka heesta diidmada ee Somaliya iyo Ciraaq kasoo jeeda
HomeWararka CaalamkaSweden oo go’an kasoo saartay Dadka heesta diidmada ee Somaliya iyo Ciraaq kasoo jeeda
Sweden oo go’an kasoo saartay Dadka heesta diidmada ee Somaliya iyo Ciraaq kasoo jeeda
June 12, 2020 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Wasiirka Caddaaladda iyo Socdaalka ee dalka Sweden, Morgan Johansson, ayaa sheegay in dowladda Sweden ay culeys saari doonto dowladaha Ciraaq, Lubnaan, Iran iyo somaliya si ay u qaataan .muwaadiniintooda magangelyo doonka ah ee ku sugan Sweden kuwaasi oo heesta diidmada.
Isagoo intaas ku daray warbixin uu siiyay wakaaladda wararka ee TT Jimcihii, in waxyaabaha aysan sidan ku sii socon karin, maadaama aan haysanno kooxo badan oo Qaxooti la diiday,
.dalalkooduna diideen inay qaataan.
Johansson wuxuu carrabka ku adkeeyay inuu ku casuumi doono safiirada dalalkan kulan qaas ah oo ay kaga wada hadlayaan arintaan, isla markaana ay gaaraan qaacido iskaashi si
.dalalkan u qaataan muwaadiniintooda.
Wasiirka ayaa sharaxay in Sweden ay la dhibaatooneyso dhibaato la mid ah tan Soomaaliya ee dhanka xiriirka Somaliya aysan leheen wakiilo u jooga wadanka Sweden.
Wuxuu carabka ku adkeeyay inay jiraan dhowr kun oo magangalyo-doon ah oo codsiyadooda la diiday oo aan loo masaafurin karin afarta dal sababta oo ah dowladaha dalalkan ayaa .diiday inay qaataan muwaadiniintooda.
Johansson wuxuu xusey in Ciraaq ay heshiis la gashay Sweden 10 sano ka hor, taas oo ay ku .oggolaatey inay qaadato muwaadiniinteeda, laakiin heshiiskaas ma uusan dhaqan gelin.
Wuxuu sheegay in dalalkani ay danaynayaan xiriirka ay la leeyihiin Sweden, ayna tahay inay u hoggaansamaan mabaadi’da sharciga caalamiga ah, kaasoo dhigaya in dalalka ka qaataan muwaadiniintooda dalalka kale
Sweden waxay aaminsan tahay in Midawga Yurub ay culeys badan saaraan wadamada diida .inay helaan muwaadiniintooda magangalyo doonka ah.